सेयर बजारमा हुनसक्ने अपराधʽसेयरको भण्डारीकरणʼ बाट बच्नुहोस् ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
कारबाहीको सुचना संगै अटेर गर्ने विमान कम्पनी धमाधम बक्यौता तिर्दै
काठमाडौँ । सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका कतिपय विमान कम्पनीले
सरकारको चेपुवामा ‘सौर्य विद्युत् उत्पादक’
देश चरम ऊर्जा संकटबाट गुज्रेको छ । भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयात गरी यसको समाधान
यी हुन् नाट्टामा संभावना बोकेका उम्मेदवार, यस्तो छ कारण
रामेश्वर कार्की काठमाडौं । भर्खरै आफ्नो ५० औं वर्ष पुरा गरी स्वर्ण जयन्ती मनाएको नेपाल
नाट्टालाई राजनीति मुक्त गराउन सिएन पाण्डेसँग सहकार्य – अच्युत गुरागाई
काठमाडौ । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेण्ट (नाट्टा)को आगामी कार्यकालको लागि प्रथम